Pese pano neapo ndinosangana nezvakatumirwa zvichitaura nezvekuti vanhu havadi "kuzviita" nemavara pasocial media uye kuti mhando yako haifanire kunge iriko, inofanira kunge iri vanhu, nezvimwe, nezvimwe zvichangoburwa. kubva kuna Mike Seidle, blogger yemuno uye bhizinesi munhu. Ndinoda kutanga kuti handizive Mike uye handina chandinopesana naye. Ini ndinomutevera pa Twitter uye ndinofunga iye kazhinji ane zvimwe
Ndakaenda pachiitiko chikuru nezuro chinonzi iyo Innovation Summit, iyo yakaiswa neIndy-based TechPoint. Clayton Christensen, mutauri, purofesa, uye munyori kubva kuHarvard University vakataura nezveDisruptive Innovation uye vakaita basa rinoshamisa. Imwe yemapoinzi ayo aakanangisa kune chakazotevera chikamu chehurukuro yake yaive yekufunga kuti ibasa ripi rinodiwa nemutengi wako kana chigadzirwa. Akapa muenzaniso wekukaka mukaka uye sei, kuburikidza
Muvhuro, September 21, 2009 Chitatu, Ndira 29, 2014 Chris Lucas
Mune rangu basa kuFormstack, in online form builder, rimwe remabasa angu kukwidziridza hukama hweveruzhinji (PR) uye kunyanya kufukidzwa kwenhau, iyo inotyaira kufambiswa uye inotyaira kutengesa. Kuve neruzivo zvese padanho nemutengi divi ndinonzwisisa izvo zvakanaka Ruzhinji Rukama femu inogona kuita kune sangano. Heano zvikonzero zvitatu, kubva pane zvakaitika kwandiri, nei mabhizinesi, uye kunyanya mabhizinesi madiki, achifanira kuhaya yekunze PR agency. Hauna Nguva Ku